2013 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ဦးသန့်ဇင်တစ်ယောက် ချဲထီထိုးလွန်းလို့ ရှိသမျှ လယ်ယာကျွဲနွားတွေလည်း ပြောင်ပြီ။
နေစရာ အိမ်တလုံးပဲ ကျန်တော့တယ်။ တခါမှလည်း မပေါက်ဘူး။
ကြံရာမတဲ့အဆုံး ရွာထိပ်ညောင်ပင်က ရုက္ခစိုးကို ပူဇော်ပသပြီး အတိတ်စိမ်းပေးဖို့ ဆုတောင်းတယ်...
“အရှင်ရုက္ခစိုးနတ်မင်း၊ ပူဇော်ပါတယ်၊ ပသပါတယ်၊ မနက်ဖန်ထွက်မယ့် ချဲဂဏန်းပေးတော်မူပါ”
သင့်ရဲ့ဘ၀မှာ သင်ဟာ အမှားတွေ ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့၊ သင် ဘယ်လောက်ပဲ အသက်ကြီးကြီး .. စသဖြင့် .. အဲဒါတွေက ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဟာ နှစ်သစ်တစ်ခုနဲ့အတူ တစ်ဖန်ပြန်စနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ ဆန္ဒရှိနေသေးသရွေ့ သင့်ရဲ့ဘ၀ကို ပိုကောင်းအောင် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်.. သို့မဟုတ် မနက်ဖြန်မှာဖတ်သူတွေ အတွက် ဒီနေ့....
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလမှာ NLD က စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစတော့မယ်...။
၂၀၁၄ မှာ ``၈၈´´က ပါတီထောင်မလား ?
၂၀၁၄ မှာ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက စည်းရုံးရေးအတွက် ဘယ်လိုအင်အားမျိုး တည်ဆောက်ထားသလဲ?
၂၀၁၄ မှာ PR စနစ် ဆိုတာ အသက်ဝင်လာဦးမလား ?
၂၀၁၄ မှာ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ``တစည´´ပါတီ ဘာတွေလုပ်မလဲ ?
၀န်ထမ်း ။ ။ ဘာမှာချင်လဲ မသိဘူးခင်ဗျာ။ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ဆိုဒါ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ချောကလက်၊ မိုင်လို၊ ကော်ဖီ လိုတာရပါတယ်ခင်ဗျာ . . .
တည်းခိုသူ ။ ။ လက်ဖက်ရည်လုပ်ပေးပါ။
၀န်ထမ်း ။ ။ ဆီလွန်လက်ဖက်ရည်လား၊ ဟာဘယ်လက်ဖက်ရည်လား၊ ဘွတ်ရှလက်ဖက်ရည်လား၊ ပျားရည်ဘွတ်ရှလက်ဖက်ရည်လား၊ လက်ဖက်ရည်အေးလား၊ လက်ဖက်ခြောက်ရည်လားခင်ဗျာ
ငါ့မှာ နေရောင်ပြင်းပြင်းတွေ ၀ိုင်းရံထိုးဟပ်ခြင်း ခံနေရတဲ့အခါ အစ်ကိုဟာ အရိပ်တခု ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ငါ့မှာ မိုးပေါက်အလုံးကြီးကြီးတွေ ထိခိုက်ရိုက်ပုတ်ခြင်း ခံနေရတဲ့အခါ အစ်ကိုဟာ စလူရွက်လေး ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ငါ့မှာ ဆောင်းနှင်းခဲတွေ အဆုပ်လိုက်၊ အဆုပ်လိုက် တအားပစ်ပေါက်ခြင်း ခံနေရပြီး ရိုးတွင်းချဉ်ဆီတွေ အအေးပတ်နေရတဲ့အခါ အစ်ကိုဟာ မီးဖိုကလေး ဖြစ်နေခဲ့တယ်။
ငါ့ကို ကူညီခြင်း၊ ရိုင်းပင်းခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း၊ ခင်မင်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းခြင်း၊ ဖြောင့်စင်းခြင်း၊ အကောင်းဆုံး အဖြူရောင်ကို ပေးစွမ်းသူ ငါ့အစ်ကို...။
ငါ့ကို မသနားတော့ဘူးနော်။ မြေအပြင်ပေါ်မှာ ကျူတိုင်တချောင်းလို ၀ီခေါ်အောင် ရပ်နေရတော့မယ့် ငါ့ဘ၀ကို အစ်ကို မစဉ်းစားခဲ့ဘူးနော်။
မိမိကိုယ်တိုင် တွေးပြီး ရယ်စရာ လိုလို
June Naing's photo.
နှစ်ပေါင်း ၆၇ ခုနှစ်အတွင်း ၁၉၄၇ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန် ရက်စွဲများ တူညီနေကြောင်း။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ များသောအားဖြင့် လူသားတိုင်း ပြောလေ့ပြောထရှိသည့် စကားတစ်ခွန်းမှာ အချိန်ကို နောက်ပြန်လည်လို့မရတော့ဘူး၊ ဒီနေ့ ဒီလ လို ရက်စွဲမျိုး တူညီမှုတွေ မရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ လက်သုံးစကားကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန် ရက်စွဲများက တော်လှန်လိုက်တာကို တွေ့ရပါသည်။
၅၉ (စ) “မိမိကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏မိဘ တစ်ပါးပါးသော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ တရားဝင် သားသမီးတစ်ဦးဦးသော်လည်းကောင်း၊ ထိုတရားဝင်သားသမီးတစ်ဦးဦး၏ ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသော်လည်းကောင်း နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ ကျေးဇူးသစ္စာတော်ကို ခံယူစောင့်ရှောက်ရိုသေသူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ လက်အောက်ခံဖြစ်သူ သို့မဟုတ် တိုင်းတစ်ပါး၏ နိုင်ငံသားဖြစ်သူများ မဖြစ်စေရ၊
မောင် Soe Min Thu တစ်ယောက် သူကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို ရည်းစားစာ လိုက်ပေးလေသည်။
တစ်ရက်လည်း မယူ.. နှစ်ရက်လည်းမယူ..
နောက်.. တစ်ပတ်လောက် ဆက်တိုက် လိုက်ပေးနေတော့.. ကောင်မလေးက သနားသွားပုံ ပေါက်သည်။ စာကို လက်ခံလိုက်သည်...။
Soe Min December 30, 2013 at 12:33pm
သမီးကို မြန်မာဆန်စေချင်လွန်းတဲ့သူ့အဖေဟာ စကားစကလေးတွေရှာပြီး အခုခေတ်မှာ မမြင်နိုင်မတွေ့နိုင်တော့တဲ့ မြန်မာ့မူဟန် ဓလေ့ထုံးစံကလေးတွေကို သိုင်းကာဝိုင်းကာ ရှင်းပြနိုင်ဖို့ ပုဂံကိုသွားလိုက်၊ ပဲခူးကိုသွားလိုက် လိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့တော့ ဘယ်ရမလဲ။ တကယ်တော့ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မန္တလးရွှေမြို့တော်ကြီးကိုမှ မရောက်ဖူးသေးရင် မြန်မာဖြစ်ရတာ ဘယ်တော့မှ ပြည့်စုံမှာ မဟုတ်ဘူး။ အီဂျစ် နဲ့ အင်္ဂလန် နိုင်ငံခြားကို မောင်သွားလို့ မထားနိုင်သေးခင် ရွှေမန်းတောင်တော်ရိပ်ခို တောင်ရိပ်ခိုဖို့ ခရီးထွက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ မန်းလေးမှာ ဘာတွေရှိသလဲလို့ မေးရင်တော့ သမိုင်းတွေ ရာဇ၀င်တွေ ရှိတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။ နောင်နှစ်ခါ ကိုးတန်းရောက်လို့ သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေပဲ သင်ရတော့မယ်ဆိုရင် တစ်သက်လုံး အိုးစားကွဲသွားမယ့် မြန်မာ့သမိုင်းထဲက ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ရဲ့ အထောက်အထားတွေ တပုံကြီးရှိတယ်။
Author: lubo601 | 10:07 AM | No မှတ်ချက် |
Soe Gyi shared YoYarLay's photo.
ငယ်တုန်းကသိပ်လေးစားတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ပြောနေကြ စကားလေးရှိတယ်။ အလို့ရိုးနေတာမဟုတ်ဘူး၊ လှည့်ပါတ်တတ်တယ်၊ မရိုးမဖြောင့်နေတတ်တယ်၊ ရိုးဂုဏ်ကို သဘောကျလွန်းလို့ ရိုးရိုးသားသားနေတာတဲ့။ ဘ၀မှာ အလွှာမျိုးစုံက လူမျိုးစုံကို နေရာအမျိုးမျိုး၊ ဒေသအမျိုးမျိုးမှာ တွေ့ကြုံဖူးပြီးနောက် ဆရာမပြောခဲ့တာလေးကို ပိုပိုသဘောပေါက်ပြီး၊ ကိုယ့်ဆရာမရဲ့ တပြည့်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာလေးကို ဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိတယ်။
Posted by zar ni (My Way!) on December 30, 2013 at 14:18 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
amoral နှင့် immoral
immoral အကျင့်ပျက်သော။ ယုတ်မာသော။
amoral သည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ စည်းဘောင်များမှကင်းလွတ်နေသည့်အခြေအနေမျိုးတွင် သုံးသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မဆိုင်သည့်အရာ၊ လူ့ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများမရှိသောဟူသည့်အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်သည်။
Humans, he argues, are amoral and what guides them is not any sense of morality but an instinct for survival. သူက လူတွေသည် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်မဆိုင်ဘဲ ၄င်းတို့အားထိန်းကျောင်းထားသည်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားသဘောမဟုတ်ဘဲ မိမိရှင်သန်ရေးဗီဇစိတ် ဖြစ်သည်ဟုစောဒကတက်သည်။
Author: lubo601 | 10:06 AM | No မှတ်ချက် |
၁၅။ဖတ်မိသမျှ ကျန်းမာရေး သုတစာများ
December 30, 2013 at 3:34am
ချိုမြပြီး ကြက်သွန်နီလို အနံ့မျိုးရှိတဲ့ ဂျူးဖူးကို အသားတွေ ကြော်ရာမှာ ရောထည့်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဂျူးဖူးအရသာကို ကြိုက်နှစ်သက် သူတို့ အတွက် ဂျူးဖူးမှာ ပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ကို ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ပညာရေး
Aung Myo Thu December 25, 2013 at 7:46pm
ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ သော့တစ်ချောင်း- ကိုရီးယားပညာရေးခရီး အတိတ်နှင့် အနာဂတ်
ယနေ့ကမ္ဘာတစ်လွှား ဘယ်နေရာသွားသွား မမြင်ချင်အဆုံးမြင်နေရမှာကတော့ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတို့၏ကြော်ငြာများ၊ လူနေအိမ်ခန်းထဲသို့ ၀င်ကြည့်လိုက်ပြန်လျှင် လည်း SAMSUNG Aircon, TV, Refrigerator တို့ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လူတွေအာရုံခံစားကာ အပန်းဖြေကြည့်ရှုနေသည်မှာတော့ ကိုရီးယားကားပင် ဖြစ်လေသည်။ ယခင်က နာမည်ပင်ကြားခဲ့ဖူးခြင်းမရှိသော SAMSUNG mobile phone များက ကမ္ဘာကျော်နေသည်။ ယခင် အိမ်တွင်ရှိနေသော SONY လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ နေရာမှာ SAMSUNG ပစ္စည်းတို့က နေရာဝင်ယူ ကုန်ကြလေသည်။
အကယ်ဒမီဆုကို “ဆဲလစ်ဗျစ်တီအားပေး မူးယစ်ဆေး” ဇာတ်ကားမှ ရရှိသွားကြောင်း (ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း)
နိုင်ငံကျော်မမကြီး သေဖော် ညှိမှုကြောင့် နိုင်ငံကျော်ကြီးများ ဆတ်ဆတ် ခါကုန်သည်။ စိတ်မထိန်းနိုင်သူ များက ခုံကို လက်သီးဖြင့် ဒုန်းခနဲထုကြသည်။ တချို့ကနံရံကို ခေါင်းနှင့် ပြေးဆောင့်ကြ သည်။ ခေါင်းအုံးလေး ခံပြီး ဆောင့်တာမို့ သိပ်မနာ။
Aung Myo Thu December 28, 2013 at 10:10pm
အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍ၊ တက္ကသိုလ်၏ အဓိက ပလေယာများဖြစ်သည့် ဆရာနှင့်ကျောင်းသား ဆက်ဆံရေး၊ အနာဂတ်ခြေလှမ်း
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ တက္ကသိုလ်ပညာရေးသည်လည်း တခြားသောကဏ္ဍများနည်းတူ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်နေလေသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများမှလည်း ဘွဲ့လွန်ကျောင်သားများကို နိုင်ငံတကာစာတမ်းများ ထုတ်ဝေရေးကို အမြဲအသားပေးပြောကြားလေ့ရှိလေသည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စာတမ်းများ ထုတ်ဝေနိုင်ရေးအတွက်လည်း လိုအပ်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အဘက်ဘက်မှ လိုလေသေးမရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးကြလေသည်။
ဘိုညိုတစ်ယောက် နည်းနည်းထွေပြီး အိမ်အပြန်မှာ MRT ရထားစီးလာတယ်။
သူ့ဘေးခုံမှာ အမျိုးသမီးချောချောတစ်ယောက် ကလေးလေးချီရင်း ပါလာတယ်။
ကလေးလေးက လေးငါးလသားလောက်ပဲ ရှိအုံးမှာ
ကလေးက ဘိုညိုကို ဘာထင်တယ်မသိဘူး ခစ်ခစ် ခစ်ခစ်နဲ့ ရီရီပြနေတာ
ဒါနဲ့ ဘိုညိုကလည်း ကလေးချစ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့ ကလေးကို မြူတာပေ့ါ... ..
9:36 PM E-book, English စာအုပ်များ
http://maungwinhlaing.blogspot.com/2013/12/blog-post_8033.html မှ ....
by ပိုပိုဇော်(သဘာဝအားအင်) December 26, 2013 at 11:34pm
အာသာရမ္မက်ရဲ့ အဆိုအမိန့်က မနက်ဖြန် ဖြစ်တယ်။ တဏှာရဲ့ အဆိုအမိန့်က မနက်ဖြန် ဖြစ်တယ်။ အလိုဆန္ဒရဲ့ အဆိုအမိန့်က မနက်ဖြန် ဖြစ်တယ်။ ဘာဝနာရဲ့ အဆိုအမိန့်ကတော့ အဲ့ဒီလို မဟုတ်ဘူး။ 'ယနေ့' ဖြစ်တယ်။ 'ယခု' ဖြစ်တယ်။ ဘာဝနာ အတွက် ပစ္စုပ္ပန်မှတစ်ပါး တစ်ခြားအချိန်ကာလ ဆိုတာ မရှိဘူး။ တခြားခဏ ဆိုတာ မရှိဘူး။
နှစ်ဆယ်ရာစုတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အံ့ဩစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခု
ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။အဲဒီအဖြစ်အပျက်က တခြားမဟုတ်၊ မြန်မာပြည်ရဲ့နတ်သားလေး
MPT ကဖုန်းတစ်လုံးကို ဆယ့်ငါးသိန်း၊သိန်းနှစ်ဆယ်နဲ့ရောင်းချခဲခြင်းဖြစ်တယ်။